China High Speed ​​Double Roller Crusher emepụta na ngwaahịa | Onye na-eme brik
High Speed ​​Ugboro abụọ ala Crusher
The ala bụ alloy na ekweghị ekwe n'elu HRC50 elu nickel, molybdenum, ọla kọpa na vanadium ihe, ọzọ onwe-arọ arọ, na nta nri n'akuku. O nwere ike ipia ma kpochapu ahihia, kpochapu ihe ndi ozo na nputa di elu, di nma nke oma, belata onu ogugu, ma hu na brik di omimi.
Okwesiri maka ihe ndi ozo nke di n'okpuru ike (Platins hardness 4-5), dika apịtị ugwu na ala na-eme ka ihe na-adighi nma.
Akara Onye BricMaker
Ọrụ Ngwaọrụ fining ndinuak
Akụrụngwa Clay, Ala, Mud, Shale, Kol, Ash, Gangue
Workingkpụrụ ọrụ 2-Ala na-azọpịa
Ф 1400 × 1200
Ugboro abụọ Roller Gap
.2 mgbasaziri ezi
75 + 95
110 + 160
3940 × 2450 × 2200
4340 × 2380 × 2350
Ọrụ na Nlekọta
a) Tupu ịmalite akụrụngwa ahụ, onye ọrụ ahụ kwesịrị ịlele ngwa ngwa dị iche iche nke ọma, nke na-enweghị ike iwepụ ma ọ bụ na-efu akụkụ. Akụkụ ntụgharị ga-eleba anya na enweghị ihe mgbochi ọ bụla.
b) Igwe ahụ nwere ike itinye ọrụ na-adịghị arụ ọrụ ma nyochaa mgbe akụkụ niile na-arụ ọrụ dị mma. O kwesịrị ịdị na-emekarị 2 awa mgbe ibu ọrụ. Oge ọ bụla iji malitegharia ekwesighi ibido mbido, mgbe ị ruru ọsọ ọsọ wee tinye n'ọrụ ọrụ.
c) N'ihi homogeneity na-adịghị ahụkebe nke ihe ahụ, vibration nke igwe niile na-arụ ọrụ nwere ike iweta ngwa ngwa rụrụ arụ, yabụ jide n'aka na ịlele ya ugboro ugboro.
d) Ọ bụ ezie na ala set nke ekweghị ekwe dị elu, anyị kwesịkwara igbochi karịrị ike nkume, na ígwè ọdịnaya mix n'ime ndepụta oghere, dị ka a n'ihi na imebi ala set.
e) Mgbe ihe nkedo dị na ntanetị karịa 132884.8N, a na-ebipụ ihe nchekwa na ụlọ ọrụ mkpuchi n'akụkụ abụọ iji kpuchido akụrụngwa ahụ. Ọ bụrụhaala na dochie igbe nchekwa nwere ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na nrụgide nke otu akụkụ ala karịa 66442.4N, nchekwa pin ga-ebipụ.
f) A na-etinye griiz calcium dị mgbagwoju anya (ZFG-1) ka ọ na-amịgharị n'oge akụrụngwa agbakọtara, ọ ga-edochi griiz ma ọ bụ gbakwunye mgbe ọ gbachara ụbọchị 10-20.
g) Akụkụ abụọ nke mgbanwe ngbanwe a na-agbanwe agbanwe kwesịrị ịdị ọcha oge niile, ma gbakwunye mmanụ mmanụ 20 # mgbe niile (oge 1 / ngbanwe), nke mere na mpịakọta a na-agbanwe agbanwe nwere ike ịgafe na igodo ntụzịaka na ndagide n'ike na mmiri nwere ike ịgbanwe, dịkwuo ndinuak ikike.
h) Roll mgbanaka eyi mmezi: iwesa ichebe nkpuchi na abụọ nke ahụ, na-etinye-egweri ngwaọrụ arụnyere na Chassis site aro aka uwe, fastening ịghasa, n'usoro ala (<10 r / min adabara, nwere ike iji elu na-agba reducer).
i) N'ịga akpụ ụkwụ, ịkpụzi kwekọrọ ekwekọ ọnọdụ, mbịne mmezi ala set.
Nke gara aga: Kemeghi Hammer Crusher
Osote: Gburugburu Stone mwepụ ala
Kemeghi Hammer Crusher
Ugboro abụọ rotor Hammer Crusher